N'ime afọ iri, lithium iron phosphate ga-eji dochie lithium manganese cobalt oxide dị ka isi anyịnya nchekwa nchekwa chemical?
Okwu Mmalite: Otu akụkọ sitere n'aka Wood Mackenzie na-ebu amụma na n'ime afọ iri, lithium iron phosphate ga-anọchi lithium manganese cobalt oxide dị ka isi ihe nchekwa nchekwa. Naa ...
Gịnị mere o ji eche LiFePO4 ọ ga - abụ isi kemikal nke ọdịnihu?
Okwu Mmalite: Catherine von Berg, onye isi oche nke Batlọ Ọrụ Batrị California, tụlere ihe mere o ji chee na lithium iron phosphate ga-abụ isi kemịkal n'ọdịnihu. Onye na-enyocha US bụ Wood Mackenzie mere atụmatụ na izu gara aga na site na 2030, lithium iron phos ...
Batrị lithium iron phosphate
Na-abanye na July 2020, batrị lithium iron phosphate CATL malitere inye Tesla; n'otu oge ahụ, edepụtara BYD Han na batrị ya na lithium iron phosphate; ọbụna GOTION HIGH-Tech, ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke na-akwado Wuling Hongguang eji mee ihe n'oge na-adịbeghị anya bụ al ...
The LIAO Enginely Power Mover LiFePO4 batrị-LAF12V30Ah ọdịda
N'oge na-adịbeghị anya, anyị nụrụ akụkọ na-enye obi ụtọ site na Europe nke ọtụtụ puku kilomita dị anya. Na caravan mover batrị arụmọrụ agbụrụ nke ANWB (Dutch Bicycle Master Association) nwere, LIAO Enginely Power Mover LiFePO4 batrị-LAF12V30Ah nke ụlọ ọrụ anyị mepụtara na-emeri ihe niile 12 ...
Mgbalị Ndị E Kwekọrọ na-emeri Ihe Isi Ike
Oria COVID-19 oria ojoo a na edebe isi n’uwa. Dị ka ọtụtụ ụlọ ọrụ dị na China, anyị na-eche nnukwu nsogbu ihu na-agba ọsọ n'usoro mmepụta anyị ma na-ebute ngwaahịa anyị. Iche echiche banyere ahia mba ofesi, LIAO Technology na-akwalite mmekorita azụmaahịa na clie ...
University-enterprise imekọ ihe ọnụ ememe
The bịanyere aka n'akwụkwọ n'ememme nke mahadum-enterprise imekọ ihe ọnụ na izi ihe isi n'etiti ulo akwukwo nke ihe sayensị na injinịa, zhejiang mahadum na anyị ụlọ ọrụ, ẹkenịmde a nnukwu oghere na anyị ụlọ ọrụ. Ọ bụ nnukwu ihe iji mepee ọhụụ ọhụrụ nke ...